Micnaha kooxaha iyo adeegsadayaasha Debian GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Micnaha kooxaha iyo adeegsadayaasha Debian GNU / Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Qaybinta, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
In GUTL Wiki Waxaan helay maqaal aad u faa'iido badan oo macnaha koox kasta iyo isticmaale kasta ee nidaamka lagu sharaxay Debian (y GNU / Linux badanaa).
Si loo siiyo isticmaaleyaasha cusub faham yar oo tan ah, kooxaha ayaa oggolaanaya (iyo waxyaabo kale) in isticmaalayaasha ka diiwaangashan nidaamka, ay qaban karaan shaqooyinka qaarkood iyadoo loo eegayo doorka kooxda. Tan waxaan ku sharixi doonaa maqaal kale 😀
Waxaan ku arki karnaa iyagoo kooxaysan koox ahaan shaxda soo socota:
Waxqabadka / U fiirsashada
xidid Superuser: helitaanka buuxa ee nidaamka. Badanaa isticmaalaha keliya root waa inay ka tirsanaato kooxdan.
iwm Nidaamka kormeerka hawsha. Aan isticmaalno xconsole oo ka akhri faylasha /var/log adigoon adeegsan amarrada su o sudo. Badanaa maamulayaasha. Magaca kooxdu wuxuu ka yimid /var/log markii hore waxay ahayd /usr/adm iyo goor dambe /var/adm
audio Kuu ogolaanayaa helitaanka aaladaha codka.
gurmad U oggolow keydinta iyo soo celinta adigoon siin rukhsad rujin isticmaale.
waxaan ahay U soo bandhig sababo la jaanqaad ah codsiyada duugoobay. Codsiyada cusub waa inaysan isticmaalin kooxdan.
CD-ga CD-ga Kuu ogolaanayaa helitaanka wadista indhaha
daemon Adeegyada u baahan in wax loo qoro si disk ah. Sababo amni awgood, waxaa la doorbidaa in adeeg kasta uu leeyahay koox u gaar ah.
wada hadalka Toos u helida dekeddaha taxanaha ah. Xubnaha kooxdan waxay dib u qaabeyn karaan modemka, garaaci karaan meel kasta, iwm.
maquufin Kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho qalabka sida pppd, pon y poff si aad xiriir ula sameysid nidaamyo kale, adoo adeegsanaya faylasha qaabeynta horay loo qeexay ee galka ku jira /etc/ppp/peers. Magaca kooxda macnaheedu waa "Dialup IP".
disk Helitaanka directo saxannada Ficil ahaan u dhigma marinka aad haysato root saxannada. Isticmaaluhu caadi ahaan kuma xirnaado kooxdan, ama waxay sameyn karaan wax qalad ah sida cat /dev/zero > /dev/sda.
fax Kuu ogolaanayaa inaad dirto ama hesho fakis.
xajmi Kuu ogolaanayaa helitaanka qalabka wax lagu riixo.
kulan Waxaa u isticmaalay ciyaaro qaar si loo keydiyo dhibcaha.
gdm Waxaa adeegsaday GDM (Maareeyaha Muuqaalka Gnome).
hilibka U adeegsaday gnats.
haldaemon Waxaa adeegsaday lakabka soo saarista qalabka.
jooji Soo gal si aad u xirto nidaamka.
irc Adeegyada ay adeegsadaan IRC. (Isticmaalaha ma guurtada ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah cillad ku jirta ircd)
qor U adeegsaday klogd, geedka geedka
km em Barnaamijyada u baahan marin u helida tooska ah ee xasuusta nidaamka. Kooxdani way aqrin kartaa /dev/kmem iyo faylal kale oo lamid ah. Ficil ahaan waa wax la mid ah BSD.
liiska Maareynta liisaska dirista. Qaar ka mid ah barnaamijyada noocan ah waxay sidoo kale isticmaalaan isticmaale isku magac ah.
lp Helitaanka tooska ah ee dekedda is barbar socota. Kooxdan waxaa dhaqan ahaan adeegsada adeegyada daabacaadda.
lpadmin Aan kuu ogolaado inaad wax ku darto, wax ka beddesho, oo aad ka saarto madbacadaha foomatic, koobabka, iyo suurto gal ahaan macluumaadka kale ee daabacadaha
email Wax ku qorida /var/mail. Waxaa isticmaalay MTA iyo MUA.
Majordom Taariikh ahaan waxaa isticmaali jiray Majordomo. Kuma rakibto nidaamyo cusub.
lab Mararka qaarkood barnaamijka ayaa adeegsada man in lagu qoro /var/cache/man.
fariin fariin ah Waxaa adeegsaday adeegga dbus (dbus-daemon-l)
news Ku qorida galka wararka. Waxaa adeegsada adeegyada iyo barnaamijyada kale ee wararka (nntp protocol).
koox-kooxeed Waxaa adeegsada adeegyo aan u baahnayn lahaanshaha faylal kasta. Caadi ahaan lagu daro isticmaalaha nobody.
operator Ujirta sababo taariikheed oo kaliya si loo ogeysiiyo hawlwadeenada kaqeyb gala Si loo kordhiyo mudnaanta waxaa la doorbidaa in la isticmaalo sudo utility.
furdev Kuu ogolaanayaa helitaanka aaladaha laga saari karo xitaa haddii aan lagu qaabeyn gudaha /etc/fstab. Faa'iido u leh isticmaaleyaasha maxalliga ah ee u baahan inay geliyaan ulaha USB, iwm. Waxaa isticmaalay barnaamijka pmount (oo had iyo jeer ku dhajiya aaladaha laga saari karo oo leh xulashooyin) nodev y nosuid).
postfix Waxaa adeegsaday MTA Postfix.
postgres Maareynta keydka macluumaadka ee PosgreSQL. Badanaa isticmaalaha kaliya postgres
wakiil Adeegyada (badiyaa adeegyada wakiilka) ee aan lahayn ids isticmaale khaas ah oo ubaahan inay lahaadaan faylal. Badanaa waxaa isticmaali jiray squid y pdnsd.
bogsii Kudarey sane-utils. Waxay umuuqataa in yar la isticmaalay.
sass Kuu ogolaanayaa in wax lagu qoro /etc/sasldb iyo / ama /etc/sasldb2, kuwaas oo loo isticmaalo xaqiijinta sasl. Badanaa waxaa loo isticmaalaa xaqiijinta serverka IMAP, POPiyo SMTP.
scanner Kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho iskaanka.
hooskii Kuu ogolaanayaa aqrinta /etc/shadow. Waxaa isticmaalay barnaamijyada qaar ee u baahan helitaanka feylkaan.
xiritaanka Soo gal si aad u xirto nidaamka.
src Milkiilaha koodhka isha, oo ay ku jiraan faylasha /usr/src. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu siiyo adeegsade awood u leh maareynta koodhka ilaha.
ssh Si looga hortago weerarada. Waxaa adeegsaday ssh-agent.
shaqaalaha Aan ka shaqeyno /usr/local, /var/local y /home. Badanaa maamulayaasha lagu kalsoon yahay.
sudo Xubnaha kooxdan uma baahna inay galaan lambarkooda sirta ah markay isticmaalayaan sudo. Eeg /usr/share/doc/sudo/OPTIONS.
sync Soo gal si aad u waafajiso nidaamka. Badanaa waxaa isticmaala isuduwaha isticmaalaha (oo leh qolof /bin/sync)
sys Kusoo bandhig sababaha iswaafajinta.
syslog U adeegsaday syslog, ujeedka guud ee blog.
cajalad Kuu ogolaanayaa marinka duubista cajalada.
tty U adeegsaday write y wall si aad ugu qorto tty isticmaaleyaasha kale. Qalabka tty y /dev/vcs ka tirsan kooxdan.
uucp Waxaa adeegsaday nidaamka UUCP.
users Si loo ururiyo isticmaaleyaasha cusub. Fiiri qoraalka dhamaadka maqaalkan.
utmp Aan u qorno /var/run/utmp, /var/log/lastlog, iyo faylal la mid ah. Waxaa isticmaalay emulators terminal ah.
video Kuu ogolaanayaa helitaanka aaladaha fiidiyaha
codka Farriinta codka. Faa'iido u leh nidaamyada u adeegsada modemka sidii mashiinnada jawaabta.
wheel Aan isticmaalno amarka su. Naafo ahaan naafo ah (eeg /etc/pam.d/su wixii faahfaahin dheeraad ah, iyo sidoo kale Qaybta 9.2.2 ee tixraaca Debian).
www-data Wixii ku saabsan qorista xogta ee server-yada. Isticmaalaha www-data ma ahan inuu asaga noqdo milkiilaha waxa ku jira mareegta, ama adeege waxyeelleeyey wuxuu u oggolaanayaa degel in dib loo qoro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Micnaha kooxaha iyo adeegsadayaasha Debian GNU / Linux
??? waan ka xumahay laakiin wali wax ma baran
Ma isiin kartaa xiriiriye aan isku sharixi karo mowduucyada farsamada noocaan ah, fadlan?
Waxaan sifiican u cusbooneysiiyaa qoraalka oo aan wax yar uga sharaxaa waxa socda 😀
Waad ku mahadsantahay macluumaadka aad ayey faa'iido u tahay, horey ayaan u daabacay oo gacanta ayaan u dhigay wadatashi.
Waxaan aruurinayaa sibidh si aan taalo kaaga dhigo… mahadsanid.
Haa, ma ogi inay taallo u taallo, laakiin taasi waa mid ka mid ah waxyaabo badan oo aan naftayda weydiiyey waqti dheer iyo in x sababaha ay tahay inaanan waqti u helin si aan u ogaado, macluumaad aad u faa'iido badan.
Mahadsanid Elav 😉
Weyn, waxay u egtahay inaad daabacdo.
Dhowr bilood ka hor waxaan ahaa sidii qof waalan oo u baahan wax sidan oo kale ah.
Maqaal aad u fiican. Marar dhif ah ma akhridaa mid leh macluumaad faa'iido leh. Aad baad u mahadsantahay.
hello waxay noqon kartaa wax yar machica kor ku xusan
Salaan. Waxaan abuurayaa isticmaale cusub waxaanan rabaa inaan ogaado haddii xulashooyinka aan hubiyo ay sax yihiin: adm, cdrom, dip, games, lpadmin, nopasswdlogin, plugdev, sambashare.
Waxa aan doonayo ayaa ah in isticmaalehu uu qaban karo wax kasta oo maamulku sameeyo laakiin aan lahayn "sudo". Intaa waxaa sii dheer, ma jiro erey sir ah, taasi waa, wuxuu si otomaatig ah u galayaa isagoon lambarka sirta gelin.
Aniga oo tixgelinaya tani waa markii iigu horreysay ee aan sameeyo, ma caadi baa sidaan oo kale mise waxbaan beddelay?
Ciidamada Cirka ee Mareykanka waxay u haajiraan Linux sababo la xiriira virus
Debian waa qaybinta ugu badan ee loo isticmaalo server-yada webka